ओलीको नाम सुन्ने बित्तिकै केहीको आङ सिरिङ्ग हुन्छ - Dainik Nepal
ओलीको नाम सुन्ने बित्तिकै केहीको आङ सिरिङ्ग हुन्छ
दैनिक नेपाल २०७१ वैशाख २९ गते २३:३२
नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशन फेरि करिब एक महिना पछि सरेको छ, यस विषयमा तपार्इंको भनाई के छ ?
नेकपा एमालेको महाधिवेशनको समयावधि माघ महिनामा नै सकिएको हो । विधानत: महाधिवेशन फागुन महिनाभित्रमै सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो हुन सकिरहेको छैन । हरेक हिसावले हेर्ने हो भने महाधिवेशन समयमै गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्थ्यो । जहाँसम्म महाधिवेशन मिति पुन: सरेको कुरा छ । यो विवाद पहिलादेखि नै थियो । कतिपयलाई महाधिवेशन केही समय पर सार्न पाए कार्यकारी पदमा अझै केही समय बस्न पाइन्थ्यो भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ । नेतृत्वमा जान रहर गरेका र तयारी नपुगेकाहरूलाई पनि केही समय महाधिवेशन सार्न पाए शक्ति सञ्चय गरेर चलखेल गर्न पाइन्थ्यो कि भन्ने पनि लागेको थियो होला । तर, एमालेका अधिकांश कार्यकर्तालाई जतिसक्दो छिटो महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ । पार्टीलालाई गतिशील बनाउन निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्ने, बैठक, भेलाहरू समयमा नै गर्ने गर्नुपर्छ । पार्टीलाई विधि अनुरुप सञ्चालन गर्न पनि पार्टीका साङ्गठनिक कामहरू समयमा गर्नुुपर्ने हुन्छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै आम कार्यकर्ताले महाधिवशेन छिटो होस् भनेका हुन् ।
तर, आम कार्यकर्ताको मागलाई समेत पूर्ण व्यवास्था गरेर महाधिवेशन मिति पटक–पटक सारिएको छ नि त ?
हो, अहिले विभिन्न बाहनाबाजीमा पटक–पटक महाधिवेशन मिति सार्ने काम गरिएको छ । पछिल्लो पटक घोषणा गरेको मितिमा पनि महाधिवेशन हुने हो कि होइन भन्ने शंका उत्पन्न हुन थालेको छ । त्यो आशंका नेतृत्व तहकै नेताहरूबाट देखिएको छ । अहिलेकै सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल चीन जानुपर्ने भएकाले महाधिवेश मिति सारिएको हो भन्ने चर्चा सबै भन्दा बढी चलेको छ । त्योसँगै दस्तावेज लेखनसँगै मस्यौदा समितिको ढिलासुस्तीले पनि समयमा काम पूरा नभएकाले महाधिवेशन मिति सरेको भन्ने गरिएको छ । कसैले त एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली विरामी भएका कारण महाधिवेशन मिति सारिएको हो भनेर चर्चा गर्ने गरेका छन् । ती सबै तर्कप्रति मेरो विश्वास र भरोसा छैन । मुख्य कुरा भनेको महाधिवशेन गर्ने–नगर्ने भन्ने कुरा अध्यक्षमा निर्भर हुन्छ । अध्यक्ष भनेको पार्टीको कमाण्ड हो । दस्तावेज लेखनको काम पूरा नहुनु पनि कमाण्डर भएका नाताले अध्यक्ष कै कारणले भएको हो । त्यति मात्र होइन महाधिवेशन जस्तो महत्वपूर्ण कामलाई नै थाती राखेर अध्यक्ष चीन भ्रमणमा जानुले पनि राम्रो सन्देश दिएको छैन त्यति मात्र होइन यसरी अनावश्यक रुपमा विभिन्न खालका वाहनामा सारिने गरेको महाधिवेशन मितिले एमालेको विश्वसनीयता माथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । यसरी पटक–पटक महाधिवेशन मिति सार्ने कुरा नेतृत्वको असक्षमता हो । अहिले कतिपय कुरामा पार्टी विधानलाई समेत पुरै उल्लङ्घन गर्ने काम भएका छन् । यसरी विधान बाहिर गएर गरिने गरेका कामले पनि आम कार्यकर्तामाथि नकरात्मक विचार पैदा हुन थालेको छ । यो राम्रो संकेत होइन ।
ए भनेपछि नेतृत्वको असक्षमताकै कारण महाधिवशेन मिति सरेको हो होइन त ?
नेतृत्वमा कार्यकूशलता भएन भने पार्टीका अङ्गप्रत्यङ्ग पनि सुचारु भएर चल्न सक्दैन । मैले भन्ने खोजेको के हो भने अहिले जुन ढंगले महाधिवेशन मिति सार्ने काम भएको छ त्यो एकदम गलत छ । कतिपयले त यो नेतृत्वको सत्तालिप्साको द्योतक हो पनि भनेका छन् । आगामी दिनमा नेतृत्वले यस्तो शंकालाई बल पुग्ने काम नगरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।
अहिले महाधिवेशनको नजिक–नजिकमा विचार केन्द्रित भन्दा पनि नेतृत्व केन्द्रित छलफल बढी भएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । भनेपछि नेतृत्वको सत्ता लिप्साकै कारण यसो भएको हो ?
अहिले मुख्य गरेर विचार र नेतृत्व हस्तान्तरणका कुरा जोडदार रुपमा उठेका छन् । कसैकसैले त नेता ओलीको स्वास्थयसँग जोडेर स्वास्थ्य मानिसले नेतृत्व गर्नुपर्छ । अस्वस्थ्य मानिसले पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भनेर गैरराजनीतिक तर्क गर्ने गरेका छन् । अहिले यी तीन ओटा कुरा कसलाई के अनुकूल हुन्छ । त्यही ढंगले उठाउने गरेका छन् । यी सबै कुरामा अतिवादी ढंगले जसले कुरा उठाउँछन् भने त्यो गलत छ । आगामी महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर नै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । त्यसैले नेतृत्व पनि त्यही ढंगको आवश्यकता छ । जबजको जगमा टेकेर नै हामी अघि बढ्छौँ । महाधिवेशन त्यहीतर्फ केन्द्रित हुन्छ । आन्दोलनको निशानालाई कमजोर पार्ने व्यक्तिले नेतृत्व गर्न सक्दैन ।
अहिले एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण कि पुस्ता हस्तान्तरण भन्ने बहस पनि पेचिलो बन्दै गएको छ नि ?
अहिले हामीले नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसलाई पेचिलो बनाउँदै लगेका छौँ । यसले केहीलाई पीडा भएको छ । हाम्रा केही नेताहरूमा मै राम्रो, मैले गरेको काम मात्र राम्रो, म जस्तो असल कोही छैनन् भन्ने जुन खालको सामन्ती सोँच छ । यसले नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसलाई अवरोध गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ । लामो समयदेखि पार्टीको नेतृत्व गरेका, आफैँले असक्षम र अयोग्य भएर राजिनामा दिएका केही नेताहरू पनि अहिले आफैँले नेतृत्व गर्नु पाउनु पर्ने दाबी गरिरहनु भएको दखिन्छ । केहीले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउन, पार्टीलाई गतिशील बनाउन मेरै नेतृत्व आवश्क छ भनेर नेतृत्व हस्तान्तणको बहसलाई अवरोध गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । त्यति मात्र होइन हामी समकालिन नेताहरूमा होइन अमूमअमूक व्यक्तिमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर समेत तर्क गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यो मानसिकता भनेको अरु कसैलाई नेतृत्व दियो भने आफु समाप्त भइन्छ भन्ने सामन्ती मानसिकताको उपज हो । यो उपयुक्त तर्क होइन ।
तपाईंहरूले भन्ने गरेको नेतृत्व हस्तान्तरण केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित छ होइन ?
पार्टीमा लामो समय योगदान गरेको, व्यक्ति, विचार र सिद्धान्तमा अडिग, एमाओवादीको उग्रवामपन्थताका विरुद्ध डटेर लडेको व्यक्ति भएका नाताले उहाँलाई अध्यक्ष बनाउँदा हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तर, उहाँलाई जसरी स्वाथ्यसँग जोडेर उहाँले नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न भन्ने खालका तर्क गरिएको छ । त्यो एकदम गलत छ । उहाँ अहिले विरामी पर्नु भएको होइन । उहाँ ७ वर्ष अघिदेखि नै विरामी हुनुहुन्थ्यो । आठौँ महाधिवेशनमाा पनि उहाँ विरामी नै हुनुुहुन्थ्यो । त्यतिबेला अहिले नेतृत्वको दाबी गर्ने नेताहरूले नै भोट हाल्नु भएको थियो । अहिले उहाँहरूले नै त्यो खालको आरोप लगाउनुको कुनै औचित्य छैन । नेता केपी ओली उहाँको चाहनाले विरामी हुनुभएको होइन । विरामी जो पनि पर्नसक्छ । त्यसैले यस्ता खालका तर्क गरेर नेतृत्वको दाबी गर्नु हास्यास्पद कुरा हो । समकालीन नेताहरूले नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ । उहाँहरूको योग्यता, क्षमता आम कार्यकर्ताले थाहा पाइसकेका छन् । अब बाँकी भनेको नेता ओली नै हो । त्यसैले पनि हामीले यो पटक नेता ओलीलाई अघि सारेका हौँ । म नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । ओली कमरेडको नाम लिने वित्तिकै आङ नै सिरिङ्ग हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । यस्तो खालको तर्कले पार्टी र आफू स्वयम्लाई पनि भलो गर्दैन । यस्ता तर्क गैर राजनीतिक तर्क हुन् । समकालीन नेताहरू माधवकुुमार नेपाल र अध्यक्ष झलनाथ खनालले पार्टीको नेतृत्व गरिसक्नु भयो । उहाँहरू प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो । त्यसैले उहाँहरूले फेरि म पार्टी अध्यक्ष बन्छु भन्ने कुरा गर्न सुहाउँदैन । कार्यकर्ताहरूले यो पचाउँदैनन् पनि । नेताहरूले कतिपय कुरा चीनियाँ कम्युनिष्ट नेता हुजिन्ताओबाट पनि सिक्नु पर्ने हुन्छ । जिन्ताओले आफू लोकप्रिय हुँदाहुँदै पनि नेतृत्व छाडेर अझ लोकप्रिय बनेर उदाहरण दिनुभएको छ । त्यसैले नेतृत्वमा बसिरहेर मात्र लोकप्रिय बनिदैँन । नेता खनाल र नेपालले अझै लोकप्रिय बन्ने हो भने उहाँहरू दुबै जनाले आगामी नऔँ महाधिवेशनमा समर्थन गरेर नेता ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउँनु पर्छ । नेकपा एमालेका आम नेता कार्यकर्ताको चाहना पनि यही हो । उहाँहरूले सहमतिको आधारमा नेतृत्व चयन गरेर राजनीतिक संस्कार देखाउँन सक्नुपर्छ । म भए सर्वसम्मत नभए निर्वाचन भन्ने सोच त्याग्नु पर्छ । सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुनुपर्छ ।
पछिल्लो पटक घोषणा गरेको मितिमा महाधिवेशन हुने संभावना कत्तिको छ ?
मैले माथि पनि उल्लेख गरेँ । अब कुनै पनि वाहनावाजीमाा असारमाा गरिने भनेको हाधिवेशन मिति सार्नु हुँदैन । त्यो मितिबाट पनि महाविधेशन मिति सार्ने अवस्था आयो भने आम कार्यकर्ताले महाधिवशेन मिति घोषणा गर्ने अवस्था आउँन सक्छ । त्यो अवस्था नआवस् भन्ने आग्रह म नेतृत्वलाई गर्न चाहन्छु ।
आकार सानो भए पनि राष्ट्रिय सभामा धेरै राम्राे काम गर्‍याैँः सरिता प्रसाइँ
नेपाली कांग्रेसले युवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु पर्छ : नेतृ डोल्मा तामाङ
एमसीसी सहयाेग राेक्नु हुँदैनः विश्वप्रकाश शर्मा (अन्तर्वार्ता)
राष्ट्रहित विपरित छैन भने अमेरिकन सहयोग लिनुपर्छः रोमी गौचन (अन्तर्वार्ता)